हजारौं वर्ष पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो ‘सेक्स टाेइज’ प्रयोग – rastriyakhabar.com
हजारौं वर्ष पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो ‘सेक्स टाेइज’ प्रयोग
एजेन्सी । यौन खेलौनाको नाम लिने बित्तिकै मानिसहरु लजाउने गर्दछन् । कुनै अर्कै संसारका बारेमा कुरा हुँदैछ जसरी मानिसको फरक व्यवहार हुने गर्दछन् । यौन सुख दिने यी खेलौना अर्थात सेक्स टोइज हाम्रा पूर्खाले हजारौं वर्षदेखि नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
संसारकै सबैभन्दा पहिलो कृतिम लिङ्ग २८ हजार वर्ष पुरानो फेला परेको छ । यो जर्मनीमा फेला परेको हो । प्राचिन ग्रीस र इजिप्टमा यसको प्रयोग हुने गर्दथ्यो । काँचो केरादेखि ऊँटको सुकेको गोबरसम्मका कृतिम लिङ्गहरुको प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । यसका साथै ढुंगा, छाला वा काठका कृतिम लिङ्गहरुको पनि प्रयोग हुने गर्दथे । धेरै समयसम्म सेक्सको अर्थ भनेको पुरुषहरुमा हुने सन्तुष्टी नै मानिन्थ्यो । त्यतिबेलासम्म महिला सन्तुष्टी नभए उनलाई रोग लागेको अर्थ लगाउँदै उनको उपचार गर्न तिर लागिन्थ्यो ।
महिलाहरुमा असन्तोष भए उनीहरुलाई उत्ताउली भन्दै रोग लागेकोका रुपमा सर्वत्र चर्चा हुने गर्दथ्यो । त्यो समयमा धनी महिलाहरु आफ्नो उत्ताउलोपनको उपचारको मौका अलिक बढी दिने गरिएको बताइएको छ । सन् १८८० को दशकमा बेलायतका डा. जोसेफ मार्टिमर ग्रेनविलले पहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल भाइब्रेटर आफ्नो पेटेन्ट गराएका थिए ।
२० औं शताब्दीको शुरुवातमै निजी कम्पनीहरुले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भाइब्रेटर भएको कृतिम लिङ्ग बनाउन लागेका थिए । पत्रिकाहरुमा भान्साका सामानको विज्ञापनमा यसको पनि विज्ञापन हुने गर्दथ्यो । यसका आलोचकहरु भने अब त पुरुष र महिलाको आवश्यकता नै नरहने भो भन्दै तर्क गर्दथे ।
कृतिम लिङ्गलाई डिल्डो भनिन्छ । यो शब्दको प्रचलन सन् १४०० एडी तिरबाट शुरु भएको मानिन्छ । यो ल्याटिन शब्द डिलाट्रेटको अर्थ चौडा गर्ने भन्ने हुन्छ । इटालियन शब्द डिलेटोको अर्थ खुशी हो यहीबाट डिल्डो शब्द निस्किएको हो । सन् १९२० को दशकभन्दा पहिला पनि डिल्डो वा भाइब्रेटरको प्रयोग उत्ताउलो बिरामी निको पार्नका लागि हुन्थ्यो । सन् १९२० पछि पोर्न फिल्महरुमा डिल्डोको प्रयोग मात्र यौन सुखका लागि भएपछि यसमा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।
आइतवार, असार २०, २०७८ मा प्रकाशित
सारीमा सन्नी लियोनका हट अवतार ३ तस्विर
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको सामूहिक निष्कर्ष
सत्ता गठबन्धनभित्र सुरु भयो लडाँई
ओलीद्धारा प्रधानन्यायाधीश मात्र हैन परमादेश दिने पाँच न्यायाधीशको राजीनामा माग
मंसिर मसान्तभित्र पार्टीको महाविधेशन सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको तयारी
संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर मात्र म बाहिरिन्छुः प्रधानन्यायाधीश जबरा
प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ५७ हजार रुपैयाँको ऋण
तीन बैंक र पाँच फाइनान्स राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा
परिचय नखुलेका व्यक्तिलाई भाडामा बस्न नदिन गृहको आग्रह
सर्वोच्च बारले पनि माग्यो प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा
प्रधानन्यायाधीशलाई जसरीपनि घुडा टेकाउने बार एशोसिएसनको यस्तो छ तयारी
स्वदेश फिर्ती र होटल क्वारेन्टाइनको खर्च सरकारले दिएन
वर्तमान सरकार पुरै अवधि टिक्छ : परराष्ट्रमन्त्री खड्का
फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने १४ जना न्यायाधीशको निर्णय
२० हजार तीन सय ५६ जना शिक्षकको लागि आयोगद्धारा बिज्ञापन
उनी हुन् सबैभन्दा ठूलो नाक भएका मानिस, लम्बाई थाहा पाउँदा चकित
एनआईसी एशिया बैंकले तपाइलाईपनि यसरी लुट्ला !
पूर्व राजपरिवारका सबै पुस्ता पहिलोपटक एउटै मञ्चमा, कलाकारहरुको लर्को
पार्टी अवैध भइसक्यो, देउवालाई सभापति मान्न कोही बाध्य छैन : रामचन्द्र पौडेल
भदौ १६ गतेसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित
देशभरी आइसोलेसन र क्वारेन्टिन अभाव
जोर बिजोर र मास्क लगाउने कार्यलाई कडाइ गर्न मातहतका निकायमा निर्देशन
प्रदेश नम्बर २ मा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट आठ जनाको मृत्यु
बोष्टर मिडियाको सफलतापुर्बक ७ बर्ष पुरा (फोटो फिचर सहित )
ओली-नेपालबीच झण्डै तीनघन्टा भेटवार्ता : ओलीले भने, ‘अब मिलेर जाऔँ, अबको नेता तपाईँ नै हो’
उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा आजदेखि अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र कोरोना संक्रमितको संख्या ५१ हजार नाघ्यो
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई बागमती प्रदेशले दियो तीन करोड
एमाले अध्यक्ष र राष्ट्रपति अस्वीकार गरेको थिएँः अमिक शेरचन
अचानक सरकारमा सहभागी भएका चार सांसदलाई जसपाले गर्‍यो कारबाही (पूर्णपाठ)
राष्ट्रियताको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिन जरुरी : मुख्यमन्त्री पोखरेल
प्रदेश ५ नाम र राजधानी : नाराबाजी र होहल्लाबीच छलफल सकियो
दाङको भालुवाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रदेश ५ सरकारको निर्णय
इमेल : rastriyakhabar100@gmail.com
© 2014-2021, Regd No:262 -2073/74, www.rastriyakhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित